Ungawana sei basa muQatar? Yekukurumidza gwara kune vatorwa uye Qatar - ALinks
Wese munhu anoda kuwana basa muQatar anoda kutanga awana basa kuQatar. Uye ipapo ivo vanogona kuwana mvumo yekugara kana vachida imwe. Izvi zvese zvinogona kuitwa kubva kunze kwenyika kana muQatar. Ehe, vagari veQatar havadi mvumo yekugara kuti vawane basa, asiwo vagari vanobva kuSaudi Arabia, Oman, Kuwait, Bahrain, kana United Arab Emirates (UAE) havadi mvumo yekugara kuti vawane mabasa mazhinji muQatar. . Chero imwe nyika ichafanirwa kunyorera pamwe nevavanoshandira, kana agency yekushandira, mvumo yekushanda. Verenga zvimwe pazasi nezvekuti ungawana sei basa muQatar uye kuti ungawana sei mvumo yekushanda kuQatar.
Ungawana sei basa muQatar?
Kuti uwane basa muQatar iwe unongoda kutsvaga basa muQatar. Verenga zvimwe pazasi pane kwaungawana basa muQatar.
Paunenge iwe uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchipa basa Haudi mvumo yekugara kana iwe uri mugari weQatar kana kana uchibva kune imwe nyika yeGulf Cooperation Council (GCC), iri Saudi Arabia, Kuwait, Bahrain, UAE, kana Oman.
Vamwe vese vatorwa vanotsvaga basa muQatar vanofanirwa kuda kuwana mvumo yekugara. Iwe unowanzo shanda newaunoshandira nyowani, kambani, kana agency yekushandira. Vachawana iwe vhiza yekupinda munyika kana usiri muQatar kare.
Paunenge iwe uchinge uine waunoshandira uyo anogona kukutsigira iwe, ivo vanofanirwa kubata ese mapepa ekuti uwane iwe yekugara mvumo. Kana iwe wakagamuchira chinopihwa chebasa usati wauya munyika, waunoshandira anoda kushandura vhiza yako yenguva pfupi kuti ive mvumo yekugara mukati memavhiki.
Residence mvumo inowanzo kukupa iwe sarudzo yekuunza yako mhuri kuQatar newe, futi. Iwe zvakare unoda kunzwisisa zvinoitika nemvumo yako yekugara kana ukachinja waunoshandira kana kurega kushanda.
Unogona kuwana basa muQatar nekutsvaga online mikana yemabasa muQatar. Iwe uchawana basa kungave zvakananga nekambani kana kuburikidza nesangano remabasa. Heino runyorwa rwe dzinogona nzira dzaunowana basa muQatar.
Nzvimbo dzeJob muQatar
Baidu, Google, Naver, Sogou or Yandex, kana chero imwe injini yekutsvaga yaunovimba nayo: paunotanga kutsvaga basa, nyore webhu kutsvaga kunogona kutanga kwakanaka. Tarisa rudzi rwebasa raungade kuita, semuenzaniso, "Anoshanda kuvaka muDhaha" kana "Musiki wezvinyorwa muQatar". Shandisa mutauro waunonzwa wakasununguka kutaura. Usamire pamapeji ekutanga uye enda wakadzika nekutsvaga kwako. Iwe unozonzwa nekukurumidza kunzwa kwezvakakomberedza uye nezvekuti ndeapi mawebhusaiti emabasa akakodzera kwazvo pane zvaunoda.
Chokwadi Qatar, Chokwadi ndeye webhusaiti webasa rezvepasi rose asi iri zvakare imwe yenzvimbo dzinoshanyirwa nzvimbo muQatar.
naukrigulf.com ndeimwe yenzvimbo dzinonyanya kushanyirwa nzvimbo muQatar, inotarisa pamabasa muQatar, UAE, Oman, Bahrain, Saudi Arabia, neKuwait.
Gulf Talent uye Monster Gulf achiri maviri anozivikanwa masosi emabasa muQatar.
Bayt ndiyo inonyanya kufarirwa nzvimbo yebasa inoshanda zvakanyanya neWestern Asia, kana Middle East, uye Noth Africa. Zviri muChirungu neArabic.
Ekushandira masangano muQatar
Kana iwe, semuenzaniso, nyora 'yekushandira agency padhuze neQatar' paGoogle Mepu kana chero imwe mepu sevhisi iwe unogona kuwana runyorwa rweanomira akanaka maunogona kubata Iwe unogona kuita zvakafanana kunzvimbo yako kuti utarise kana uine agency yemuno inogona kukubatsira iwe kuwana basa muQatar.
Ziva kuti iwe haufanire kubhadhara ejensi kana vakutsvakira basa, saka chenjera kana agency ichikubvunza iwe mari uye woongorora kuti agency iri pamutemo sei.
Bvunza zvakakukomberedza iwe kuti uwane mabasa muQatar
Fomu kubatana, bvunza kwakatenderedza, uye uwane mikana yakatenderedza vako vaunosangana navo Taura neshamwari dzeshamwari dzevanhu vangangofambwa kana. yakashanda muQatar kana dzimwe nyika dzeGCC. Kunyangwe iwe uri Qatari kana iwe uchiuya uchibva kunze kwenyika, iwe uchashamisika kuti sei dzimwe shamwari dzako kana mhuri vangangoziva munhu anoziva mumwe munhu.
Chidimbu chemufananidzo wekuvhara pamusoro apa Chinyakare mu Corniche, Doha, Qatar. Mufananidzo na Rowen Smith on Unsplash
Kushanda nebasa muAustria
Sei Kuwana Basa muNorway
Ungawana Sei Basa MuHong-Kong?
Unoda Kushanda kuUK .. Tora Basa Hona !!
Kuwana Basa MuThailand? Hezvino izvo zvaunoda !!